News :: FilmyKhabar : Nepali Film News, Celebrity, Pictures, Songs, Videos
Results : 1 -6of 112
मल्टिप्लेक्सको दादागिरी कहिलेसम्म ?
नविन थापा, काठमाडौं, २०७२ भाद्र १६, बुधवार
दर्शकले मन पराई राखेको नेपाली फिल्म प्रदर्शन गर्दागर्दै हलबाट निकालेर हलिउड तथा बलिउड फिल्म प्रदर्शन गर्नुले मल्टिप्लेक्सको एकलौटी राज छरपष्ट झल्कीन्छ | लामो समयको अन्तराल पश्चात फिल्म क्षेत्रमा फर्किएका एक्सन स्टार निखिल उप्रेतीले मंगलबार सोहि हेपाहा प्रवृति महसुस गरे |
प्रियंकालाई चिन्न `माला` हेर्नुस्
फिल्मीखबर, काठमाण्डौ, २०७१ चैत्र ३, मंगलवार
प्रियंका कार्की पछिल्लो समय रूचाईएकी अभिनेत्री हुन् । अभिनय र काम गर्ने शैलीले सबैको मन जित्दै गएकी प्रियंकाका यो बर्ष आधा दर्जनभन्दा बढि फिल्म रिलिज भए । सफलता ? शून्य जस्तै छ । उनको व्यस्तता भने ज्यादै छ ।
सलमानकी फ्यान भन्छिन्- `किस गर्न गार्‍हो भएन`
सुमन गैरे, काठमाण्डौ, २०७१ माघ ११, आईतवार
मम्मी सलमान खानको फ्यान । दुई दिदीहरूको नाम डिम्पल र ममता अनी भाइको नाम सलमान । आफ्नो नाम माला । कफीको सुर्की लगाइसकेर हाँस्दै भनिन्, 'हाम्रो त परिवारको नाम नै कलाकारको छ । हामी त सबै फिल्मी । यहि फिल्मी माहोलले मलाई एक्टिङमा प्यासिनेट बनाएको छ ।'
फिल्मीखबर, काठमाण्डौ, २०७१ माघ ९, शुक्रवार
गतबर्ष एक असफल फिल्म प्रदर्शनमा आएपछि अभिनेता जीवन लुईटेललाई घाटा लागेको थियो । 'नाई नभन्नु ल २' प्रदर्शनमा आएपनि जीवनको भूमिका विशेष मात्र भएकाले यसको सफलताको जश उनले पाएनन् । यो बर्ष लगातार ३ फिल्म असफल भएपछि जीवनलाई धक्काको महसुस भएको हुनुपर्छ ।
ग्ल्यामर फोटोग्राफर फिल्मको हिरो
रेम बिक, पोखरा, २०७१ माघ ९, शुक्रवार
खासमा फिल्ममा अभिनय गर्नु उनको लक्ष्य थिएन । स्टिल फोटोग्राफि नै उनको सानैदेखिको सोख हो । जुन अहिले आएर पेशा बनेको छ । लजालु स्वभावका भूपाललाई फिल्म खेल्छु जस्तो पनि लागेको थिएन । तर निर्देशक केश गुरुङले अकस्मात फिल्म खेल्ने हो ? भनेर सोधेपछि उनलाई पनि क्यामेरा अगाडि आउने रहर जाग्यो । भन्छन्– ‘कुरा भैरहँदा रहरै रहरले फिल्म खेल्न मलाई उत्प्रेरित गर्‍यो ।’
समुदायमै सिमित गुरुङ फिल्म
रेम बिक, पोखरा, २०७१ पौष २५, शुक्रवार
गुरुङ भाषा र संस्कृति । गुरुङ नै निर्देशक, निर्माता, कलाकार र प्राविधिकहरु । र, प्रदर्शन पनि गुरुङ समुदायबीच मात्रै । भाषिक र सांस्कृतिक फिल्मको केन्द्र मानिने पोखरामा वार्षिक गुरुङ संस्कारमा आधारित नेपाली फिल्महरु २० वटा भन्दा बढि बन्दै आएका छन् ।